NIN SOOMALI-SWEDEN AH OO LAGU XIREY ISRAEL OO LAGA SOO MUSAAFURIYEY.
33 jir soomaali-sweden ah oo ay qabteen ciidamadda sirdoonka Israel isagoo doonaya inuu ka baxo wadanka kuna sii socday Jordan horaanta bishan maarso ayaa laga soo saaray Israel.
Ninkaan waxaa uun lagu qabtey baaritaan joogto ah oo ay sameynayeen ciidamada Israel oo ay kula kulmeen dabadeedna waxay uga shakiyeen inuu xiriir la leeyahay waxa ay ugu yeeraan argagixisada, ma ahayn nin la baadi goobayay oo la baafiyey ,loogamana shakin wax dambi ah. Mar ciidamadu wareysanayeen ayuu muujiyey ama laga dareemay inuu rabitaan aan xad laheyn u hayo ururka argagixisada ah ee Al-qaacida waa sida ay Israel hadalka u dhigtaye.
Maamulka Israel ayaa hadaba u arka ninkaan soomaali-swedenka ah inuu khatar ku yahay amaankooda waxayna go'aansadeen inay Israel ka saaraan dibdanbana uusan ugu soo noqon ama si abadiye ugu soo laaban karin dhulka ay Isael ka taliso. Hay'ada sirdoonka ee wadankan Sweden oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan S�po ayaa waxay cadeysay in ninkaan uusan wax dambi ka laheyn agtooda waa sida lagu soo daabacay jariidada Metro cadadeedii 23 maarso, 2002.
Hadaba dadka siyaasada Israel indha indheeya ayaa rumaysan in dambiga kaliya oo uu ka galay Israel uu yahay kaliya in magaciisa uu yahay magac muslim uuna asalkiisu ka soo jeedo wadan muslim ah oo, uusan wax aadmahu dambiga u yaqaan uusan gelin oo ay Israel doonayso inay u dulaysato sida ay hada gumaysiga ugu heyso dadka rayidka ah ee reer falistiin ee aan waxba galabsan.
C/xakiim Axmed Guled Stockholm, Sweden
DOWLADDA SWEDEN OO RAALI AHAASHO KA DALABTEY DOWLADA TURKIYA(SVT) Maanta ayaa Anna Lindh oo ah wasiirka wasaarada arimaha dibadda ee dowlada Sweden ka dalabtey raali ahaasho dowlada Turkiya hadal loo turjumi karo inay ugu yeertay wadanka kaligii taliye. Afhayeenka wasaarada arimaha dibadda oo lagu magacaabo Berit Jobeos ayaa sheegay in Anna ay khadka taleefoonka kula xiriirtey dhigeeda Ismail Cem oo ayna ka raali galisey habkii ay erayadeeda u xulatey wasiirada.
Shir qaramada midoobey qabatey usbuucaan ayay ku tiri Anna Lindh �waa in kaligood taliyayaashu abuuraan xoriyad waasic ah, waxayna tusaale ahaan u soo qaadatey iyadoo ku weerarayso wadamada Ruushkacad, Shiinaha iyo Turkiya.
Afhayeenka wasaarada arimaha dibadda mudane Jobeus waxuu yiri Turkiya ma ahayn in lagu tiriyo amaba isku mar carabka lagu dhufto iyada iyo kooxdaan.
DHAQANGUURKA Soomaalida Sweden